Ny hazakazaka Ski farany lava indrindra amin'ny Ranomasina Mainty Andrefana | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra mainty hoditra37 KastamonuNy hazakazaka Ski farany indrindra amin'ny Ranomasina Mainty
09 / 01 / 2020 37 Kastamonu, ANKAPOBENY, Faritra mainty hoditra, TORKIA, TELPHER
Misokatra ny moron-dranomasina lava indrindra amin'ny sisin'ny Ranomasina Mainty
Kastamonu Sekretera jeneralin'ny fitantanan-draharaham-panjakan'i Kastamonu Zafer Karahasan, "Ilkiz 2-Yurduntepe Ski Center, izay manana halavirana 6 kilometatra no misy làlana lava indrindra amin'ny Ranomasina Mainty."
Ilgaz 2013-Yurduntepe Ski Center, ny fananganana izay nanomboka tamin'ny taona 6, no manana ny làlana farany lavitra ny Ranomasina Mainty izay manana halavirana 2 kilometatra.
Ny sekretera jeneralin'ny Fitantanana faritany manokana T.Zafer Karahasan dia nandinika ny fiomanana farany tao amin'ilay trano, izay antenaina hisokatra amin'ny hafanam-po amin'ny faran'ny herinandro.
Ilay talen'ny asa soa ara-tsosialy Tuncay Sönmez, Sekretera jeneraly izay nihaona tamin'ny tompon'andraikitry ny toeram-pitsaboana Hakkı Kaya sy ireo mpiasa dia nitsidika ireo sehatra rehetra ary nanome torolàlana ilaina mba hialana amin'ny fikorontanana amin'ny fanokafana.
Nanao sekretera ny jeneraly T. Zafer Karahasan rehefa vita ny fanadihadiana; Ol Yurduntepe2 Skiing Facilities olan, tetikasa lehibe indrindra amin'ny Fitantanana ny faritany manokana aorian'ny seranam-piaramanidina, dia ho vita ary ho azon'ny daholobe ho an'ny faran'ny herinandro.
Ho fanampin'izany ho ivotoeram-panatanjahantena tena ririnina indrindra eto amintsika, ny Yurduntepe no ivon-toerana mahasarika mandritra ny vanim-potoana rehetra amin'ny fahitana azy. Voalohany indrindra dia mirehareha sy mirehareha isika noho ny mahita ny iray amin'ireo tetik'asa fizahan-tany manan-danja indrindra ho an'ny faritany, faritra ary firenentsika.
Kastamonu Fitantanana ny faritany manokana dia nanolotra serivisy tena ilaina ho an'ny fampandrosoana ny faritanintsika sy ny faritanintsika tato anatin'ny 10 taona farany.
Izy io dia nanao fandrosoana lehibe manoloana ny andrim-panjakana. Ho fanampin'ny tetik'asa maro sy lehibe maro, nahatontosa tetikasa roa lehibe ny seranam-piaramanidina sy ny Ilgaz 2-Yurduntepe Ski Center. Ny fandaharam-potoanantsika ankehitriny dia ny hahatsapana ny tetikasa faha-3 lehibe indrindra, ny Museum Open Air ary ny valan-javaboahary.
Tiako ny maneho ny fankasitrahako ny Filohantsika, sy ireo depiote sy governora noho ny ezaka sy ny fanohanan'izy ireo amin'ny fanatanterahana ity tetik'asa ity.
Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy lazaiko indray fa ny fahefana Kastamonu Special Administration dia manana ny fahefana sy ny fahalalana hanao sy mitantana ireo karazana tetikasa goavana.
Ny toeram-pialan-tsambo lehibe indrindra amin'ny Ranomasina Mainty hatao amin'ny volana Oktobra
Van Lake miaraka amin'ny fisehoana ski amin'ny fanomanana ny ririnina
Mereto mountain ski lift ski slope project
Ilgaz Mountain New Ski Track
Gaziantep Erecik fiarandalamby nosokatra (Photo Gallery)
Toeram-pandehanana azo antoka sy mihidy ao Erzurum
Ny tohatra fiaramanidina izay nahafatesan'i 8 tamin'ny taona omaly dia nakatona
Singa 4,5 tapitrisa TL to Tunceli
Kianjan'ny arifisialy mankany amin'ny alan'i Bursa Atatürk
Fiaramanidina fiaramanidina any Frantsa tsy misy lanezy
Ny lakan-dalana amin'ny lakan-dalamby sy ny fiakaran'ny ski dia tonga any amin'ny Tendrombohitra Mereto
Ny seranam-piaramanidina Erciyes sy ny fiarandalamby ski dia miasa mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina
3 mankany Antalya. seranam-piaramanidina, ski slope ary fiarandalamby haingana
Ity ny tetikasam-pitrandrahana madinidinika ao amin'ny Ranomasina Mainty
Sehatry ny tetikasa logistika ao afovoan-dranomasina atsinanana
The Longest Ski Track of the Black Black Sea
Kastamonu Fitantanana faritany manokana